कार्टुनमै तीन दशक
२०७५ बैशाख १ शनिबार ०७:००:००
पत्रकारितामा तस्बिरसम्बन्धी एउटा भनाइ छ– हजार शब्दले भन्न नसक्ने कुरा एउटै तस्बिरले बोल्छ । तस्बिरलाई कुनै विवरण चाहिँदैन, आफैं बोल्छ ।
अनि कार्टुन ? कार्टुनले हजार होइन, हजारौं शब्द बोल्छ । अझ कार्टुनका साधकहरू त एक कदम अगाडि बढ्छन् र भन्छन्– तस्बिर र कार्टुन विल्कुल फरक हुन् । हरेक कार्टुनिस्ट चित्रकार हुन सक्छन् तर हरेक चित्रकार कार्टुनिस्ट बन्न सक्छन् भन्ने छैन ।
अर्थ हो– साधनाको पनि विशिष्ट स्वरूप हो– कार्टुन । रहर गर्दैमा जो¬–कसैले कार्टुन बनाउन सक्दैन । हुन पनि हो । सानै देश भए पनि नेपालमा करिब ७ हजार पत्रकार छन् । तर, कार्टुनिस्टको संख्या कति छ ? यकिन विवरण त कसैसँग छैन । तर आैंलामा गन्न सकिने छन् ।
रवीन सायमि त्यस्ता थोरै कार्टुनिस्टमध्ये पर्छन्, जसले अनवरत दशकौंदेखि कार्टुनमार्फत बेथिति, अराजकता, भ्रष्टाचारलाई कटाक्ष गर्दै आएका छन् । चल्तीका कार्टुनिस्टको सूचीमा शीर्ष ५ भित्र पर्ने रवीन कसरी यो क्षेत्रमा टिकिरहेका छन् ?
पत्रिकाको छेउमा आउने कार्टुन आकारमा सानो होला तर त्यसका लागि मेहनत भीमकाय चाहिन्छ । कला हो, त्यसलाई जन्माउन समय खर्चिनुपर्छ । अथक मेहनत गर्नुपर्छ । चित्र, भाषा, व्यङ्ग्य र समसामयिक विषयप्रति उत्तिकै अपडेट हुनुपर्छ । दिमागमा कार्टुनको भ्रुण तयार भएपछि कागजमा त्यसको स्केच तयार हुन्छ । त्यसलाई कार्टुनको आवश्यक आकार–प्रकारमा ढालेपछि पाठकले बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्, कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ सक्छ— पूर्वानुमान गर्छन् रवीन ।
कार्टुन भनेको गाली होइन, व्यङ्ग्य हो । कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ व्यङ्ग्य ?
कार्टुनले सधैं शब्द बोल्छ भन्ने हुँदैन । त्यसका लागि क्याप्सन पनि चाहिन सक्छ । तर, रवीन भने सकेसम्म कार्टुनमा शब्द राख्न खोज्दैनन् । शब्दबिनाको कार्टुन उनको पहिलो रोजाइ हो । यसकै लागि उनको साधना रहन्छ ।
“शुरुमा कार्टुन केमा बनाउने भनेरै दशौं वटा विषय दिमागमा खेल्छन् । तिनै कयौं विषयबाट छनोट गरेर एउटामा झरेपछि दिमागमा त्यसको स्केच तयार हुन थाल्छ,” रवीन भन्छन्, “स्केच बनेपछि सकेसम्म शब्द प्रयोगै नगरौं भन्ने मेरो प्रयास रहन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा अमूर्त कार्टुन हुने अवस्थामा भने थुप्रै वाक्यबाट दुई–तीन शब्दमा झार्नुपर्छ ।”
यही हो रवीनका लागि सबैभन्दा कठिन काम । उनलाई तस्बिरभन्दा पनि शब्द छोट्याउन महाभारत लाग्छ । तर, पनि उनी दुई÷तीन शब्दमै त्यसलाई झार्छन् । अन्ततः कार्टुन तयार हुन्छ ।
तीन दशक लामो रवीनको यात्रामा थुपै्र उतारचढाव आए । केही मीठा, केही तीता । यात्रा कार्टुनकै थियो । जानेको त्यही हो । एउटा संस्थापछि अर्को संस्थाको यात्रा यथावत् थियो । अफर आयो ‘कान्तिपुर पब्लिकेसन’बाट । उनले पनि चासो देखाए । हरेक संस्था प्रवेशअघि दुबै पक्षका केही न केही शर्त हुन्छन् । उनलाई शर्त राखियो— हरेक दिन एउटा पकेट कार्टुन अनिवार्य बनाउनुपर्नेछ । अरुले दिएको विषयभित्र बसेर कार्टुन बनाउनुपर्नेछ ।
सम्पादकले दिएको विषयभित्र बसेर कार्टुन बनाउन न उनले त्यसबेला स्वीकारे न आज । आज पनि उनी आफ्नो ब्रह्मले देखेको कार्टुनमात्रै बनाउँछन् । आजै होइन ब्रह्मले अह्राएको दिन ।
कार्टुन बनाएर पैसा आउला, कमाइ पनि होला । जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम पनि बन्ला तर पनि यो कसैले दिएको विषयमा दिनदिनै बनाउने चिज होइन ।
कार्टुनलाई सिर्जनाको सुन्दर रूप ठान्ने उनले त्यो शर्त मञ्जुर गर्न सकेनन् । प्रवेशअगाडि नै हात उठाए । “कार्टुन भनेको स्केच होइन, सिर्जना हो,” रवीन भन्छन्, “क्यामेराले तस्बिर खिचेजस्तो कार्टुन बनाउन सजिलो छैन ।”
कार्टुनलाई स्केचका रूपमा बुझ्ने गरिएको प्रति आपत्ति छ उनको । कार्टुन कुनै एप्सले बनाइदिने स्केच होइन, यसका लागि समय लाग्छ । सोच्ने दिमाग चाहिन्छ । अनि त्यसले पाठकलाई कुतकुती लगाउन सक्नुपर्छ । विषय फुरेपछि एउटा कार्टुन तयार गर्न उनलाई कम्तीमा तीनदेखि चार घण्टा लाग्छ ।
दैनन्दिनका घटना, परिघटनामा आधारित रहेर बनाइने पकेट कार्टुनमा रवीन उति साह्रो रमाउन सक्दैनन् । ठूलो प्रभाव राख्ने विषय उठाउन मन लाग्छ उनलाई । त्यसका लागि जति नै समय लागोस्, उनलाई मतलब लाग्दैन ।
पञ्चायतले घुँडा टेकेको थियो । शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै शासकहरू फेरिएका थिए । ती शासकबाट जनताले फरक शासनशैलीको अपेक्षा गरेका थिए । तर, जनताले त्यो आभास गर्न सकेका थिएनन् । सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरिरहेका थिए । उनको शासनशैली अनपेक्षित रूपमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको थियो । जनता कोइरालाको व्यवहारमा तानाशाही हावी हुँदै गएको आभास गरिरहेका थिए । रवीनले ‘दृष्टि’ साप्ताहिकका लागि कार्टुन बनाए— गिरिजाप्रसाद रूपरङ्गबाट सुरु भएको कार्टुन छैटौं व्यक्तिमा पुग्दा पञ्चायती शासक मरिचमानको रूपरङ्गसँग मिल्दोजुल्दो अवस्थामा पुगेको थियो ।
अहिले एनिमेसनबाट यो सहजै गर्न सकिए पनि त्यो समय भने हातैले बनाउनु पथ्र्यो । निकै मेहनत गरेर बनाएको त्यो कार्टुनले राम्रै प्रभाव पार्‍यो । कार्टुनलाई लिएर रवीनको आलोचनामात्रै भएन, धम्क्याइयो पनि ।
कहिले गाह्रो कहिले साह्रो । तर, पनि उनको यात्रा रोकिएन । बरु झन् बलिया बन्दै गए उनका कार्टुन । अक्सर त्यो समय कार्टुनलाई सिर्जनाभन्दा पनि गालीगलौच गर्ने माध्यमका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, उनले कार्टुनलाई गाली गर्ने भर्‍याङको रूपमा प्रयोग गरेनन्, व्यङ्ग्य गर्ने सिर्जनाकै रूपमा लिए ।
काम ‘दृष्टि’मै थियो । कला भरिएको कार्टुन बनाउनु नै थियो । बारा जिल्लाका न्यायाधीश काठ तस्करीमा संलग्न भएका खबरहरू आइरहेका थिए । रवीनले कार्टुन बनाए । न्यायाधीशले व्यङ्य सहन सकेनन् । अदालतमा मुद्दा हाले । एक दशक चलेको मुद्दा अन्ततः रवीनले नै जिते ।
सानैदेखि चित्रप्रति रुचि थियो । शिक्षक र चिनेजानेकाले चित्र राम्रो छ भन्थे । रवीन दङ्ग पर्थे । स्कुल तथा स्थानीय क्लबहरूले चित्र प्रतियोगितामा सहभागी हुन पठाउँथे तर उनी भने पैसा लिएर सिनेमाहल पुग्थे ।
पञ्चायतकाल उत्कर्षमा थियो । पञ्चायतको विरोधमा स–साना आन्दोलन भइरहन्थे । रवीनको बाल मष्तिस्कमा त्यसको छाप प¥यो । उनमा पनि व्यवस्थाविरोधी भाव जन्मियो । विद्यालय पढ्दाताका नै रवीनले साथीहरूसँग मिलेर ०३८ सालमै ‘हातेमालो’ र ‘सहलह’ नामक पत्रिका प्रकाशन गरेका थिए । त्यसमा उनी स्केच बनाउँथे । उनका स्केचले पञ्चायतको विरोध गर्थे ।
टेलिभिजन थिएनन् । मनोरञ्जनका साधन कमिक्सहरू हुन्थे । त्यो बेला कमिक्स निकै बिक्री हुन्थे । रवीन पनि किन्थे ।
“३ रुपैयाँ पथ्र्यो कमिक्स किन्न । नयाँ कमिक्स त किन्नु परिहाल्यो, तर कसरी किन्ने ? आफैं कमिक्स देखाएर पैसा जम्मा गर्थें र त्यसबाट उठेको पैसाले नयाँ कमिक्स किन्थें,” रवीन भन्छन्, “तिनै कमिक्समा भएका चित्र हेरेर जस्ताको तस्तै बनाउने प्रयास गर्थें ।”
पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । धमाधम पत्रिकाहरू निस्किन थाले । अधिकांश पत्रिकाले कार्टुन बनाउँथे । ती प्रत्येक पत्रिका हेर्थे रवीन । तिनले मात्रै पुग्दैनथ्यो । उनको चित्त बुझ्दैनथ्यो । त्यसैले भारतीयलगायत अरु देशका पत्रपत्रिका हेर्न ब्रिटिस काउन्सिल पुग्थे ।
विदेशबाट नेपाल आइपुगेका पत्रिकामा पनि कार्टुन हुन्थे । कार्टुन त कार्टुन नै हो तर फरक पाउँथे रवीन— नेपाली र विदेशी कार्टुनमा । नेपाली कार्टुनले गाली गर्थे तर विदेशका काटुनले व्यङ्ग्य गर्थे । उताका कार्टुनमा कला भेटिन्थ्यो, यताका कार्टुनमा गाली चित्र हुन्थ्यो ।
त्यो बेला नेपालमा सम्पादकले कसलाई गाली गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई गर्ने गालीका शब्दसमेत दिएर स्केच गर्न लगाउँथे । रवीन भन्छन्, “तर त्यो कार्टुनिस्टको कार्टुन होइन । कार्टुनिस्ट आफैंले बनाएको कार्टुनमा व्यङ्ग्य हुनुपर्छ, ह्युमर हुनुपर्छ र क्यारिकेचर पनि हुनुपर्छ तर त्यो बेला नेपाली कार्टुनमा सीधै गालीमात्रै हुन्थ्यो ।”
रवीनले राजनीतिक विषयमा कार्टुन बनाएर छापेको पहिलो पत्रिका ‘दृष्टि’ हो । सरकार प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । उनकै कार्टुन बनाएका थिए रवीनले २०४७ सालमा । नारायण ढकाल सम्पादक थिए । उनले ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिए ।
अफसेट प्रविधि नेपालमा भित्रिसकेको थिएन । लेटर प्रेसमा छापिने भएकाले ब्ल्कमा कार्टुन बनाउनु पथ्र्यो । इमेज जस्ताको तस्तै आउँदैनथ्यो । शब्द लतपतिएर आउँथ्यो । कार्टुन बनाउनका लागि घाम लाग्नुपथ्र्यो । उनी सम्झन्छन्, “असार–साउनमा कार्टुन बनाउन घाम पर्खिएर छतमा गएर बस्नुपथ्र्यो । घाम लागेन भने कार्टुनको आइडिया नै खेर जान्थ्यो ।”
‘दृष्टि’बाट शुरु भएको उनको कार्टुन करिअर अहिले ‘नागरिक’सम्म पुगेको छ । ‘कान्तिपुर’को अफर लत्याएका रवीनले ‘जन आस्था’, ‘छलफल’, ‘प्रकाश’ र ‘हिमाल’मा काम गरे । उनका थुप्रै कार्टुन विदेशी सञ्चारमाध्यमले पनि प्रयोग गरेका छन् । शक्तिराष्ट्रका विषयलाई व्यङ्ग्य गरेर बनाइएका कार्टुन विदेशी पत्रिकाले ‘क्यारी’ गर्छन् । एउटा कार्टुनको ६०–७० डलर दिन्छन् । सयौं सञ्चारमाध्यमले कार्टुन प्रयोग गरे भने एउटै कार्टुनले पनि हजारौं डलर कमाइ गर्न सक्छ ।
‘ग्लोबलाइज’ भएका विषय र व्यक्तिका विषयमा बनाइएका कार्टुन एजेन्सीमार्फत जान सके नेपाली कार्टुनिस्टले पनि राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । तर, यसका लागि विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा जानकार हुनुपर्छ । भाषामा परिपक्व हुनुपर्छ । र, सम्बन्ध, सम्पर्क पनि हुनुपर्छ ।
कार्टुनमात्रै बनाएर जीविकोपार्जन हुने समय आइसकेको थिएन । सधैंभरि अभिभावकसँग हात थापेर जिन्दगी चल्दैनथ्यो । साइन्स पढाउने परिवारको सपना रवीनबाट पूरा भएन । उनीभन्दा पनि परिवार चिन्तित थियो ।
परिवारले एकदिन आफन्तकै मोटर कारखानामा लिएर गयो । त्यहीँ काम गर्न भन्यो ।
तीन–चार दिन काम पनि गरे उनले । तर, हातमा कलम र कुची बोकेर चित्र कोर्ने र कार्टुन बनाएर व्यङ्ग्य गर्ने उनका हातले मोटरका स्क्रू र रेन्चो समाउन मानेनन् । उनले घर पुगेर भने, “मबाट यस्तो काम सम्भव हुँदैन । म फाइन आर्ट पढ्छु ।”
रवीन ललितकला क्याम्पस पुगे । डिप्लोमासम्म पढाइ हुन्थ्यो । पढे ।
त्यो समय उज्ज्वल कुन्दन ज्यापू, शरद रञ्जित र बात्स्यायनका कार्टुन छापिन्थे । रवीन हेर्थे । उज्ज्वल कुन्दन र शरदका कार्टुनहरू कार्टुनभन्दा पनि धेरै स्केच हुन्थे । तर, वात्स्यायनका कार्टुनमा भने कला हुन्थ्यो ।
“म कार्टुनै बनाउँछु भनेर लाग्दा पनि कार्टुनलाई नै व्यवसाय बनाएर बाँच्न सकिन्छ भन्ने अवस्था थिएन,” पुराना दिन सम्झँदै रवीन भन्छन्, “हामीले नै हो कार्टुनलाई कलापक्षमा ढालेर यसलाई व्यवसाय बनाएको । कला भरिएको कार्टुन बनाएपछि पाठकले मन पराउँदै गए । माग बढ्दै गयो । माग बढेपछि कार्टुनिस्टले पनि कार्टुन बनाएरै जिउन सक्ने वातावरण बन्दै गयो ।”